जापानको विकसित शहर देखेपछि क्याप्टेन विजय लामाले भने : “देश नेताले होइन, जनताले नै बनाउने हो, नेताको भर नपरौ” – ताजा समाचार
फिल्मी पर्दामा देख्नेहरू उनलाई ‘हिरो’ भनेर चिन्छन्। टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनी प्रस्तोताको रुपमा चिनिन्छन्। सामाजिक कार्यक्रममा अगुवाई गरिरहँदा उनी सामाजिक अभियन्ताका रुपमा बुझिन्छन्। र, जब उनी नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस ए-३२० को ककपिटमा हुन्छन्, उनको पहिचान पाइलटको रुपमा हुन्छ। नेपाल एयरलाइन्सका सिनियर क्याप्टेन विजय लामाको जीवनमा धेरै आयाम छन्। उनको ३० वर्षे उडान यात्राका धेरै कथा र कहानी छन्। सिनियर क्याप्टेन लामा पनि नेपाल एयरलाइन्स पाइलटमात्र नेपाली ध्जवाबाहको यसको विकास र विस्तारको अावाज उठाउँछन्। लथालिङ्ग भएको वायुसेवा निगमलाई जीवन दिन कोसिस गरिरहेका हुन्छन्।
सिनियर क्याप्टेन लामा जति व्यस्त छन्, समयको व्यवस्थापन पनि त्यसरी नै गर्न जानेका छन्। यही जीवनशैलीका कारण विश्वभरिका लाखौं पाइलटमध्येमा उनले अलग पहिचान बनाएका छन्।सुन्दा गर्वै लाग्छ–नेपाल एयसलाइन्स सीधै जापान उड्न थालेको छ । चालिस हजार फिट भन्दामाथि उचाइको आकासमा चन्द्र र सूर्य ध्वजासहितको विमान एसियाकै विकसित मुलुक जापानको भूमिमा अवतरण गर्दा नेपाली मन उमङ्गले तरङ्गित भयो । नेपाली जहाजले गुणात्मक फड्को मारेकोमा नेपाल मात्र नभई विश्वभर छरिएका नेपाली समुदायलाई खुसीको संदेश पनि दियो ।
यसै क्रममा जापानमा पुगेका क्याप्टेन लामाले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरे नेपाल देश प्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन् । आकाश बाट जापानको बिकशित शहर देखेपछि उनले आफ्ना बिचारहरु सामाजिक संजालमा पोखेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “ओसाका स्तिथ म बसेको होटेलको मेरो कोठाको झ्यालबाट देखिने दृश्यलाई कैद गर्न खोझ्दा मेरो मनमा हाम्रो नेपाल पनि कहिले यस्तो होला भनेर आउँछ!” “असम्भव त कुनै कुराको पनि छैन तर सम्भव बनाउन कठिन देख्छु किनकी जब सम्म हामी नेपाली नागरिक नै यहाको नागरिक जस्तै देश बनाउने चेतनामा बस्दैनौ, देश प्रती इमान्दार हुन्नौ र सधै दोश जति अरु माथी मात्र थेग्छौ तब सम्म केही हुने वाला छैन!”
उनले अघि लेखेका छन्, “देश जनताले नै बनाउने हो!! कसैले हैन! अझै भन्ने हो भने राजनिती दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरुको भरमा मात्र देशलाइ सुम्पिनु जस्तो गलत सोच राख्नु ठूलो गल्ती हो हाम्रो!उनिहरुलाइ गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु झन ठूलो अपराध होइन र?”
उनले थप अघि लेख्दै भनेका छन्, “मित्रहरु..उठ्नु पर्यो आ आफ्नो ठाउँ बाट देशको लागि नकि कसैको भर परेर बस्नु ?” “जापान जस्तो केही प्राकृतिक श्रोत (sources) नभएको देश त यस्तो बिकसित मुलुक बन्न सक्छ भने प्राकृतिक श्रोतको धनी देश नेपाल किन हुन सक्दैन?”
अब उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै पढ्नुहोस :
ओसाका स्तिथ म बसेको होटेलको मेरो कोठाको झ्यालबाट देखिने दृश्यलाई कैद गर्न खोझ्दा मेरो मनमा हाम्रो नेपाल पनि कहिले यस्तो होला भनेर आउँछ!
असम्भव त कुनै कुराको पनि छैन तर सम्भव बनाउन कठिन देख्छु किनकी जब सम्म हामी नेपाली नागरिक नै यहाको नागरिक जस्तै देश बनाउने चेतनामा बस्दैनौ, देश प्रती इमान्दार हुन्नौ र सधै दोश जति अरु माथी मात्र थेग्छौ तब सम्म केही हुने वाला छैन!
देश जनताले नै बनाउने हो!! कसैले हैन! अझै भन्ने हो भने राजनिती दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरुको भरमा मात्र देशलाइ सुम्पिनु जस्तो गलत सोच राख्नु ठूलो गल्ती हो हाम्रो! उनिहरुलाइ गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु झन ठूलो अपराध होइन र? त्यसैले मित्रहरु..उठ्नु पर्यो आ आफ्नो ठाउँ बाट देशको लागि नकि कसैको भर परेर बस्नु!!
जापान जस्तो केही प्राकृतिक श्रोत (sources) नभएको देश त यस्तो बिकसित मुलुक बन्न सक्छ भने प्राकृतिक श्रोतको धनी देश नेपाल किन हुन सक्दैन?
सोचको मात्र कमि भएको हो! अरु केही हैन! सोच बद्लौ देश बनाउन लम्कौ!!! शुभ दिन सबैलाइ…. जय चन्द्र सुर्य!!